रजश्वलाको पहिलो घण्टी : शरोनका लागि उत्सव (भिडियो सहित) « Mero LifeStyle
शरोन भुर्तेल । कक्षा ६ । उमेर ११ बर्ष । केही दिन अघिको कुरा । अचानक रगतले रङ देखायो । शरोन पहिलोपटक रजश्वला भइन् ।
स्वभाविक हो,संसारका हरेक महिला रजश्वलामने प्रक्रियाबाट गुज्रिनुपर्छ । यो हरेक महिलाको जीवनमा आउने नियमित चक्र पनि हो । महिलाको शरीरमा देखिने परिवर्तनको प्राकृर्तिक संकेत हो । जननीको प्रारम्भिक कदम पनि हो । अरु किशोरीजस्तै शरोन पहिलो पटक रजश्वला भइन् । तर, रगतको रातो रङले उनलाई तर्साएन । परिवारले उनलाई अध्याँरो कोठाको कुनामा खुम्चिएर बस्न भनेन । न कुनै छोइछिटो न भान्सा पस्न रोकतोक ।
शरोनका अभिभावकले रजश्वला र रातो रङलाई संकेत गर्ने आकर्षक केक अर्डर गरे । छोरीलाई ख्वाय आफुले पनि खाए । उत्सवको यो पहिलो घण्टीमा छोरी शरोनले चिया बनाएर अभिभावकलाई खुवाइन् ।
असहज ब्यवहार ? अँह यस्ता केही कुरा भोग्नु परेन शरोनले । हो,हामीकहाँ रजश्वला भएकी महिलामाथि धेरै किसिमको बारबन्देज लगाइन्छ । तर शरोनका लागि पहिलो रजश्वलाले उत्सवको जन्ती लिएर आयो । यो कसरी ? कारक हो,शरोनका अभिभावकको चेतनाको स्तर । आमा नमिता पौडेल र बुवा सुवास भुर्तेलको प्रेरणा अनि मार्गदर्शनकै कारण शरोनले आफ्नो पहिलो रजश्वलालाई स्वभाविक रुपमा लिन सकिन् ।
प्राय हाम्रा किशोरीहरु यस्तो बेला डर,त्रास र अपहेलनाको मारमा पर्छन । तर यहाँ त्यस्तो केही भएन । शरोनका अभिभावकले रजश्वला र रातो रङलाई संकेत गर्ने आकर्षक केक अर्डर गरे । छोरीलाई ख्वाय आफुले पनि खाए । उत्सवको यो पहिलो घण्टीमा छोरी शरोनले चिया बनाएर अभिभावकलाई खुवाइन् ।
आमा नमिताले छोरीको पहिलो रजश्वलालाई उत्सवको रुप दिएको प्रसङ्ग र तस्विरहरु सामाजिक संजालमा राखिन् । उनले लेखिन,‘..मलाई गर्व छ कि मेरी छोरी प्राकृर्तिक रुपले हुर्किदैँ छिन् र म हरेक चरणलाई उत्साहको रुपमा मनाउँछु ।’ बधाईको ओइरो त बाढी जस्तै आयो । सबैले यसलाई घरबाटै सुरु गरिएको सामाजिक रुपान्तरणको कोशेढुङ्गा माने ।
आमा नमिताकी साथी प्रतिमा भण्डारीले फेसबुकको भित्तामा लेखिन्, ‘साथी,तिम्रो यो पाइलाले आज साँच्चै ह«दय विभोर भयो । गर्विलो शुरुआत गर्यौ । आज म आफू नै पहिलो पटक रजश्वला भएको महशुस भयो । अनि छोरीसँगै मैले पनि पहिलो रजश्वला भएको उत्सव मनाए,मन मनै । समाजले साधुवाद भन्नैपर्छ शरोनका यी अभिभावकलाई । अझ आमा नमिताले आफू पहिलो पटक रजश्वला हुँदा भोगेको शारिरिक र मानसिक प्रताडना छोरीले भोग्नु नपरोस भनेर जुन सचेतना देखाइन,त्यसले शरोनलाईमात्र होइन, सिङ्गो नेपाली समाजलाई पनि गतिलो सन्देश दिएको छ ।
नेपोलियनले त्यसै भनेका थिएनन,‘असल आमा पाए म असल राष्ट्र दिन्छु ।’
‘महिला हिंसा अन्त्य गर्न नाराबाजी हैन, धेरै काम’ (भिडियोसहित) « Mero LifeStyle
[…] पनि…रजश्वलाको पहिलो घण्टी : शरोनका लागि उत…यसो भन्छन् : जिल्ला हाँक्ने ५ महिला […]